Oonodoli bakwa-HR ngumvelisi osemthethweni we-TPE we-Sex
Serena 156CM Wheat D-Cup Golden Wig HR Orange Lips TPE Lifelike Sex Dolls
Izulu 156CM Umbala Wengqolowa D-Indebe Yokwenyani Unodoli Omkhulu Impundu HR Ibele Elikhulu TPE
Unodoli wakwa-HR NGUMvelisi oThenjiweyo woonodoli ngokwesondo
U-HR Doll ngumvelisi othembekileyo woonodoli besini. Oonodoli be-HR benziwe ngebakala lonyango lwe-TPE, abangeyotyhefu, banobuhlobo bendalo, kwaye banokwenyani xa bebamba. Oku kwenza umngxuma owonwabileyo wedoli yakho yesondo uzive i-velvety kwaye ithambile, ngelixa i-silicone inokongeza ubuhle Iinkcukacha. Oonodoli bakwaHR babe nentsimbi edityanisiweyo, enokuthi ibenze babe bhetyebhetye kunye nokomelela. Usenokungazi ukuba i-HR ibhalisiwe kwaye yaqinisekiswa kwi-TDF. I-HR Doll ngokukhethekileyo kuphando kunye nophuhliso kunye nokuveliswa koonodoli besini, bekhonza abathengi ngefilosofi yoshishino "lokunyaniseka, umgangatho, kunye nenkonzo yokuqala". OoDoli bakwa-HR badume ngokuba nenyani TPE iidoli ezintandathu kunye noyilo lwentloko ye-silicone yonke, zonke ezokuqala kwaye zizodwa zohlobo lwe-HR.
Igama: HR Doll
Material: I-TPE sex Doll Uhlobo: Oonodoli besondo be-Blonde, Oonodoli abakhulu bezocansi zebele, oonodoli bezesondo beKrisimesi, Oonodoli beenwele ezimfutshane, Oonodoli beenwele ezibomvu, oonodoli besondo abahendayo, njalo njalo.
Intshayelelo: Usenokungazi ukuba zimbalwa iibrendi ezinikezela ngoonodoli bezesondo abahlukeneyo kwaye babodwa njenge-HR Doll. Nokuba uthanda isifuba esincinci kunye nomfanekiso wezemidlalo, okanye umzobo ogobileyo kunye nowasetyhini kakhulu, unodoli wakwaHR unokuhlangabezana neemfuno zakho. Banochungechunge olukhangayo lwe-TPE ephezulu kunye oonodoli besondo be-silicone kunye nezinye ezizodwa oonodoli besini besilisa. Siyazingca ngokusebenza noonodoli bakwa-HR kwaye siyazi ukuba uya kuzithanda iimveliso zabo zoonodoli.
Izinto eziluncedo kooDoli bakwaHR:
1. Zonke izinto ezisetyenziswayo zikumgangatho ophezulu wezonyango, aziyityhefu kwaye zinobuhlobo nokusingqongileyo
2. Umkroli ukrola ubuso kunye nomzimba ngokwamaqela ahlukeneyo abathengi, kwaye wenze ngokwezifiso oonodoli ngokweemfuno zabathengi.
3. Sebenzisa ukupakisha okungangeni moya ukukhusela nokugcina i-100% entsha kraca kwaye icocekile
4. I-HR DOLL inikeza iimveliso zeklasi yokuqala kunye neenkonzo zokuqala
5. Thina 100% siqinisekisa umdla wabathengi bethu
6. Sisoloko sigxininisa ukuba ukwaneliseka kwabathengi yeyona nto siyifunayo
7. Siya kuhlala silapha, inkonzo yokuthengisa kwangaphambili, inkonzo yokuthenga, inkonzo emva kokuthengisa